Mareykanka oo cunaqabateyn saaray lix nin oo Al Shabaab taageerto
Dowlada Mareykanka ayaa maanta cunaqabateyn kusoo rogtay lix nin oo u kala dhashay dalalka Eritrea, Sudan iyo Kenya oo ay ku sheegtay in ay taageeraan Al Shabaab.
War laga soo saaray Xafiiska la socodka dhaqaalaha dadka ajnabiga ah ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan ay waajibineyso in la xayiro hantida lixdan ruux iyo sidoo kale in laga mamnuuco dhaq dhaqaaq kasto oo ganacsi oo Mareykanku lug ku leeyahay ama shaqsiyaadka ay la leeyihiin ganacsiga.
Arintan waxa loogu sameeyey beey warbixintu leedahay in laga hor istaago in ay caawiyaan Al Shabab iyo Al qacida.
“Mareykanku wuxuu go,aan ku gaaray inuu bartilmaameedsado kuwa mas,uulka ka ah dhiiga haatan ku qubanayo Soomaaliya iyo xasilooni la,aanta halkaasi ka jirto,” sidaa waxaa yiri agaasimaha Xafiiska la socodka dhaqaalaha dadka ajnabiga ah Adam Szubin.
Xafiiskan ayaa magacaabay dadka la saaray cunaqabateyntan xaga dhaqaalaha ah kuwaasi oo kala ah rorneel Eritrean ah oo la yiraahdo colonel Tewolde Habte Negash, waxa sarkaalkan oo ah nin ka tirsan sirdoonka Eritrea lagu sheegay inuu yahay nin dhaqaalo badan u gudbiya Shabab.
Waxaa kale oo lagu sheegaa inuu ahaa ninki ka danbeeyey in uu wanaagsanaado xiriirka Erirea iyo ururka Al Shabaab sanadki 2006, waxa sidoo kale uu ahaa maskaxdi ka danbeysay in hub loogaga keeno halkaasi kooxdan, isaga oo ku lug lahaa dhaqaalo la siiyey kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya tan iyo sanadki 2004.”
Ninka kale ee isna kasoo jeedo Eritrea waa Col. Taeme Abraham Goitom, waxaa lagu sifeeyey inuu door weyn ka ciyaaray soo dhaweynti Ururkii Isbaheysiga Dib U-xoreynta Somaliya ee la dagaalamay dowlada FKMG Soomaaliya.
Qofka sadexaad waa Suhayl Salim Abd-El-Rahman, oo lagu naaneeso Abu Faris, kaasi oo Mareykanku ku tilmaameen inuu yahay nin u dhashay dalka Sudan balse haatanba ku sugan Soomaaliya.
Raga kale waa Kenyan waxaana ay kala yihiin Aboud Rogo Mohammed, iyo wadaadka la yiraahdo Omar Awadh Omar iyo Abubaker Shariff Ahmed oo lagu sheegay in ay yihiin rag muhiim ah isla markaana fududeeya dadka loo qoro Al Shabaab.
Omar hada wuxuu ku xiranyahay dalka Uganda isaga oo loo heysto doorki uu ka ciyaaray qaraxyadi Kampala 11-ki July 2011 xilli ay socdeen ciyaarihi aduunak halkaas oo ay ku dhineetn 74 ruux.